In kabadan 46 motif (qaab) bilaash ah oo lagu soo dejiyo oo loogu isticmaalo Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Jawharad | | Maamulayaasha, Photoshop, Khayraadka
Qaababka o sababaha Photoshop waxay noogu adeegaan hawlo aan dhammaad lahayn Naqshadeynta. Mid ka mid ah kulliyadeeda waa in "la xidho" asalka, sida ku dhacda daaqadda wada hadalka ee barnaamijka sida WhatsApp, si loo sameeyo meel bannaan oo lagu dabooli karo midab cad oo fidsan oo raaxo leh.
Tan awgeed waxaan keenaynaa tiro wanaagsan oo ah ujeeddooyin ama qaabab si ay ugu habboonaadaan fikraddaas aad ka raadineyso asalka barnaamijka ama bogga laftiisa. Kaliya maaha kuwani isticmaalkeeda, laakiin way kala duwanaan karaan. Noocyo tayo leh oo aad u soo dejisan karto shaqo dhib la'aan waxayna u dhexeeyaan kuwa ugu caansan illaa kuwa ugu casrisan. Waxaa jira in la kala doorto sida aad arki karto, sida laga soo xigtay waxaad haysataa ilo aad u tiro badan oo loogu talagalay Photoshop.
1 Qaababka Micro
3 Fiber kaarboon Checkered ah
4 Xirmada Qaabka Buluuga ah
5 Xirmada Qaabka Casaanka
6 Xidhmada Qaabka Honeybear
8 Xiddigaha iyo balanbaalisyada
10 Qaabab kala duwan
11 Mawduucyada 'Monochrome'
12 Sababaha 02
16 Ubaxyo kala duwan
18 Dareemo fiican
24 Dahab iyo lacag
27 Dhaldhalaalka Dahabka ah
31 Si xarago leh
33 Boqoradda Anne
40 Wareeg giraan
42 Wareeg qaybsan
43 Dheeman dhib badan
44 Dheemannada aan xaddidnayn
45 Ciyaar dheeman
46 Halloween dadab
Laga soo bilaabo Photoshop 7 ama ka sareeya, ama mid kale nooca barnaamijyada naqshadeynta sida Elements 2 ama GIMP, waxaad isticmaali kartaa qaababkan ku dhowaad cadka.
Waxaan u soconaa 70-meeyadii oo leh muraayaddan Phothosop. Waxaad ubaahantahay inaad kuxirnaato qaabka isticmaalka ganacsiga.
Fiber kaarboon Checkered ah
Sababta Fiber kaarboon Checkered ah taas oo loo isticmaali karo dhammaan noocyada qaabdhismeedka ama qaabdhismeedka qaabeynta 3D.
Xirmada Qaabka Buluuga ah
Jeex jeexjeexyo ah midabbo kala duwan oo u eg gidaarka gidaarka qolka guriga, inkasta oo jihadaas si jaantus ah loo muujiyey.
Xirmada Qaabka Casaanka
Sida tii hore, laakiin leh codadka pastel ee noocyada kale ee ujeeddooyinka Photoshop ama barnaamij kale oo nashqadeyn ah.
Xidhmada Qaabka Honeybear
Iyada oo hooska cagaaran, waxay u muuqdaan kuwo halkii dhar kala duwan oo loogu talagalay dharka miiska jikada ama qolka cuntada waxoogaa guridda ah.
Midab leh quluubta iyo qaababka wareega taas oo ah mid asal ah loona isticmaali karo degellada qaabeynta.
Xiddigaha iyo balanbaalisyada
Este hannaanku waa mid aad u fudud si diirada loo saaro midabka dahabka ah iyo balanbaalistaha iyo xiddigahaas.
Magac aad u fudud tan motif ee midabka cagaarka ah asalka iyo dhalooyin baalal fiican leh.
Qaabab kala duwan
Qayb ka mid ah 6 sababo kala duwan afar midab oo kala duwan.
Taxane ah motifs oo leh qaabab joomatari taasi waxay leedahay fikradda ah inaad ku jirto madow iyo caddaan.
A taxane ah ujeedooyin kala duwan oo midabbo iyo qaabab isugu jira waxay u dhexeeyaan fallaadho, astaamo ilaa calaamadaha.
Sababahaasi waa diiradda lagu saaray qaabab ubaxyo kala duwan oo leh midabbo cagaar, guduud iyo midab oranji ah.
Himiladu waa macdan ah oo leh dhammaad aad u xiiso badan bogaggaas ama shaqooyinka la xiriira mishiinnada.
Kaarboonka ujeeddada xarrago leh ee CS2 iyo CS3 labadaba.
Ubaxyo kala duwan
Qaabkani wuxuu adeegsanayaa a wejigiisa iyo taxane naqshadeyn caleen ah leh lahjadda on qalooca iyo wareega.
Qayb ka mid ah 12 qaab oo qaabab kala duwan ah iyo midabbo ku habboon fikraddaada ugu muhiimsan.
11 sababood oo cusub taas oo loo isticmaali karo wax kasta oo aad rabto taasna waxaa lagu kala saaraa muuqaal ahaan "cufan".
Un naqshadeynta qaabka sawirka wax yar oo macabre ah, laakiin aad uga duwan kuwa kale oo dhan.
Mid kale oo ah a midab gradient ah leh ujeedada ubaxa.
Un qaabka xiisaha leh ee qaabka, inkasta oo classic sinnaba aan loo cusbooneysiin karin.
En cagaar iyo guduud madow waxaan uga baxeynaa ujeedadaas.
Monochrome oo loogu talagalay naqshad kale oo gaar ah leh qaabab wareegsan.
Dahab iyo lacag
Dahab iyo qalin aan hagaagsanayn casumaadaha arooska, maalmaha dhalashada iyo inbadan.
25 astaamaha xargaha Waxay u dhexeeyaan midabbo sida miro guduud, buluug, cagaar, iyo jaalle. Bilaash u adeegsiga ganacsiga.
Model dumbbell loogu talagalay jimicsiyada yeelashada ujeedo ujeedo fudud.
Dhaldhalaalka Dahabka ah
12 x 12 iyo qaabka laba, mid adag iyo mid madmadow. Waxaa loo isticmaali karaa ganacsi ama shaqsiyeed.
Saameyntaas bokeh sidaas ku socda hadda taasna waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada maaliyadeed.
Sababaha ku habboon Christmas-ka Toddobadood oo iyagu waxay la jireen waxyaalo cayn kasta ah oo isku sharrax ah iyo shuqullo.
Qaababka loogu talagalay Maalinta Jacaylka leh qalbi aad u qurux badan oo raaxo leh.
Si xarago leh
Asalka midabbo hufan oo kala duwan.
Sidoo kale lehna taariikh hufan iyo midabbo kala duwan.
Ujeeddo kale oo leh ubax horumarin ku saleysan sawirrada xargaha boqoradda Anne.
Sababaha qaar si fiican loo qaabeeyey oo xiiso leh midab leh. Guud ahaan waxaa jira 20.
Maamulayaasha loogu yeero kafeega sababaha oo dhan sida websaydhka ama gidaarada.
Sababaha qoraallada qaabkan xiisaha leh aad u layaab leh dhibic macmal ah.
para Habeenkii ciidda ujeeddooyinkan kaamil ah ee wadar ahaan lixda ah.
Faahfaahin sababtaas loogu talagalay Photoshop oo ku habboon xilliga dayrta.
Maamulayaasha retro funky design weyn leh midab dahabi ah.
Grid hufan loogu talagalay ujeeddada giraan qalin.
3 midab oo motif ah daboolid ku habboon websaydhada militariga.
Naqshad wanaagsan oo loogu talagalay a motif wareeg ah oo cad, buluug iyo madow.
Dheeman dhib badan
Rhombuses sida haddii waxaa lagu rinjiyeeyay burush cad iyo madow.
Dheemannada aan xaddidnayn
Ku fududee ujeedkan 5 marmarka qaabka dheeman.
3 nooc oo dusiyeen leh qaab dheeman.
Nabarada diagonal dhammaan noocyada midabbada dhalaalaya loogu talagalay Halloween.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Maamulayaasha » In kabadan 46 ujeedooyin bilaash ah (qaabab) si loo soo dejiyo loona isticmaalo Photoshop
G. Berriyo dijo
Gujinaya sawir kasta oo qoraalkan ah http://blueblots.com/freebies/500-truly-useful-resources-of-free-high-quality-patterns/ waad soo dejisan kartaa xoogaa feylal ah illaa aad ka dhameystirto wax ka badan 500.
Ku jawaab G. Berrio
Waa inaad ku keydisaa wadadan kumbuyuutarkaaga
C: \_ Faylasha Barnaamijka \_ Adobe \_ Adobe Photoshop CS3 \_ Tilmaamaha \_ Qaababka
Ka dibna ka raadi barnaamijka
Ma aqaano sida loo soo dajiyo sababaha!
Waxaan rajeynayaa inay soo noqoto, maxaa yeelay boggu aad buu u wanaagsan yahay waxaanan doonayay inaan soo dejiyo waxyaabo kale
Ku jawaab camila
Saamayn aad u qabow, waad ku mahadsantahay wadaagista
Ku jawaab Tere Renteria
hello waa dad aad u wanaagsan oo macangag badane ah waxyaabo badan waxaad tahay wiil kale oo fart
Sababaha waa kuwo aad u wanaagsan, mahadsanid, waan ku qancay boggan ,;)
Ku jawaab roberto
Waxaan u arkaa boggaaga mid aad u xiiso badan, laakiin waxaan isku dayay inaan xoogaa amotive ah geeyo Photoshop cs5 mana awoodo. Sideen ugu beddelaa feylashaan si aan u xoqo.
Sikastaba waan koobiyeeyaa ujeedooyinka laakiin waxay kujiraan qaab jpeg ka dib markaan u badalo qaabka pat maxaa yeelay hadii kale looma rari karo phothosp waxaan isticmaalaa cs4 ultra, fadlan i caawi
Ku jawaab wer
Salaan Si iyo Wer,
Faylasha ayaa ah sawirro vectorized ah, laakiin ma ahan qaabab Photoshop ah.
Naqshad lagu dhejin karo marar badan inta aad rabto ayaa sidoo kale loo yaqaan qaab, lagu gaarayo naqshad joogto ah ... ayaa la soo sheegay.
Ku jawaab Gema
Hadda NSN! dijo
Saaxiib aad u wanaagsan ayaa in badan ii adeegay.
Att.e Eztre »'
Jawaab Esztre NSN!
halkee ayaan gujinayaa si aan u soo dejiyo?
Ku jawaab Nanna-Chan
Su'aal, Waxaan haystaa adobe c6 (midka cusub) oo wuxuu furayaa oo keliya qaababka .pathy, iyo waxa aan soo degsaday waa .abr, sideen u furi karaa kordhintaas? Faa'iido maleh inaad ku rido galka
Ku jawaab hhguvf
feylasha .abrku waa burush ujeedooyinkuna waa .pat
Ku jawaab jina
Faylasha lagu soo dejiyo qaababku waa qaar .jpg, sideen ugu beddelaa .pat? Waxaan hayaa Photoshop cs2 hadaanay ahaynna ma aqoonsana. Mahadsanid
Ku jawaab marianan
Waad ku mahadsan tahay, waxtarkaaga weyn, tani waxay ahayd wixii aan raadinayay
Ku jawaab juancho
la imow kordhin gif ama jpg = (waayo?
Hadda waxaad u adeegsan kartaa dhammaan ilahayaga sifo la'aan sidoo kale waxaad ku soo dejisan kartaa koodhka calaamadda * Qoraalkani waa mid kooban oo aan lahayn ansax qandaraas. Wixii macluumaad dheeraad ah, hubi Shuruudahayada Adeegsiga ka hor intaadan isticmaalin waxyaabaha ku jira.
Jawaab Amelia Pizarro
sababo aad u wanaagsan, mahadsanid
Ku jawaab hyo
77 casharro ah oo lagu sameeyo boodhadhka filimka